Burburinta lakabka ozone: sababaha, cawaaqibta iyo sida loo daryeelo | Saadaasha Shabakadda
Lakabyada jawiga ee aan ku leenahay waxaa ka mid ah mid naga ilaaliya shucaaca halista ah ee qorraxda. Waxay ku saabsan tahay lakabka ozone. Lakabka ozone waa midka laga helo stratosphere wuxuuna ka kooban yahay badanaa ozone. Dhibaatadu waxay tahay inay keenayso a burburka lakabka ozone iyada oo ay sabab u tahay waxqabadka warshadaha ee aadanaha. Mahadsanid heshiisyo kala duwan godkii lagu abuuray lakabkan wuu yaraanayaa. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira shaqo badan oo la qabanayo.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa sida burburka lakabka ozone u saameynayo meeraheenna iyo waxa la sameeyo si loo daryeelo.
1 Burburinta lakabka Ozone
2 Muhiimadda laga fogaanayo burburinta lakabka ozone
3 Sida loo daryeelo
Waa lakab difaac ah oo ku yaal stratosphere. Waxay u shaqeysaa sida miiraha shucaaca qorraxda ee ultraviolet-ka ee waxyeellada u leh noolaha. In kasta oo lakabkani muhiimad weyn u leeyahay badbaadada, haddana innaga bani aadamku wali waxay umuuqdaan kuwo go’aansaday inay burburiyaan. Chlorofluorocarbons waa kiimikooyin baabiiya ozone-ka ku yaal stratosphere iyada oo loo marayo fal celinno kala duwan. Waa gaas ka kooban fluorine, koloriin, iyo kaarboon. Markuu kiimikadan gaaro stratosphere, wuxuu maraa ficil-celin sawir-qaadis ah oo la socota shucaaca ultraviolet ee qorraxda. Tani waxay keentaa in meykuculadu burburaan oo ay u baahan yihiin atomyo koloriin ah. Chlorine waxay la falgashaa ozone ku jirta stratosphere, taasoo keenta in atamka oksijiin sameysmo oo jabiyo ozone.
Ozone ayaa laga helaa stratosphere waana mid u dhexeeya 15 ilaa 30 kiiloomitir sare. Lakabkaan wuxuu kakoobanyahay molecules ozone, asigoona kakooban 3 atam oo oksijiin ah. Shaqada lakabkani waa inay soo nuugto shucaaca ultraviolet B isla markaana u dhaqmo sida miiraa si loo yareeyo dhaawaca.
Burburinta lakabka ozone waxay dhacdaa marka fal-gal kiimikaad uu dhaco oo sababa burburka ozone Shucaaca qoraxda ee dhacdada waxaa lagu sifeeyaa lakabka ozone, halkaasoo molecules ozone ay dhex galaan shucaaca ultraviolet B. Marka tani dhacdo, molecules ozone waxay u kala baxaan oksijiin iyo nitrogen dioxide. Nidaamkan waxaa loo yaqaan 'photolysis'. Waxay ka dhigan tahay in moleekuleyaasha ay ku burburayaan tallaabada iftiinka.
Sababta ugu weyn ee burburka degdega ah ee lakabka ozone waa sii deynta chlorofluorocarbons. In kasta oo aan horay u soo sheegnay in dhacdada qorraxda dhacdaa ay baabi'iso ozone, waxay ku sameysaa si dheellitiran oo dhexdhexaad ah. Taasi waa, qadarka ozone ee ay ku daatay photolysis wuxuu la mid yahay ama ka yar yahay qadarka ozone ee ay abuuri karto isku xidhka isku xidhka jirka
Muhiimadda laga fogaanayo burburinta lakabka ozone
Lakabka ozone-ka wuxuu ku fidaa stratosphere aduunka oo dhan. Isku mid ma'aha dhumucda dhammaan dhulka Dunida, laakiin isku-uruurintu waa isbeddelaysaa. Maaddada loo yaqaan 'ozone molecule' waxay ka kooban tahay saddex atam oo oksijiin ah waxaana lagu arkaa qaab gaas ah oo ku yaal stratosphere iyo dusha sare. Haddii aan ka helno ozone tropospheric, taas oo ah, heerka dusha sare ee dhulka, waa wasakhayn iyo waxyeelo caafimaad.
Hase yeeshe, ozone-ka laga helay stratosphere wuxuu leeyahay himilada ah inaan iska difaacno falaaraha falaadhaha ee qoraxda. Raajooyinkan ayaa waxyeelo u leh maqaarka, dhirta iyo duunyada meeraha. Haddii lakabka ozone uusan jiri lahayn, ma awoodi karno inaan dibadda u baxno annaga oo aan is gubin oo kansarka maqaarku wuu ku sii fidayaa adduunka oo dhan.
Lakabka ozone-ku wuxuu keenaa in badan oo shucaaca qorraxda ah oo ka yimaada meelaha bannaanka ah in dib loo celiyo oo uusan gaadhin dusha sare. Sidan ayaa nalaga ilaaliyaa shucaacaas waxyeelada leh.
Haddii lakabka ozone uu daciifiyo illaa heer uu ka sii daayo qorraxda falaadhaha UVA ee waxyeellada u leh, waxay si daran u saameyn kartaa moleculeyaal muhiim u ah nolosha sida molecules DNA.
Bini'aadamka, soo-gaadhista xad-dhaafka ah ee shucaaca noocan oo kale ahi waxay ku keentaa saameyn caafimaad oo daran, sida muuqaalka kansarka. Dhirta sidoo kale waxaa ku yaal a hoos u dhaca heerka sawir-qaadista, koritaanka hoose iyo wax soo saarka. Sawir la'aan, dhirtu ma noolaan karto ama ma abuuri karto oksijiin, iyagoo dhuuqaya CO2 hawsha.
Ugu dambeyntiina, nidaamyada deegaanka ee badda ayaa sidoo kale saameeya illaa 5 mitir ee ugu horreeya ee qoto dheer (taas oo ah aagga ay ku badan tahay shucaaca qoraxda). Meelahan badda, heerka sawir-qaadaha ee phytoplankton wuu yaraanayaa, wax muhiim ah maadaama ay tahay saldhiga silsiladda cuntada.
Si loo ilaaliyo lakabka ozone, dawladaha adduunka waa inay dejiyaan tallaabooyin lagu yareynayo qiiqa gaasaskan waxyeellada leh. Haddii kale, dhir badan ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo shucaaca qoraxda, kansarka maqaarku wuu sii kordhayaa, qaar ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka oo aad u daran ayaa dhici doona.
Heer shaqsi ahaan, muwaadin ahaan, waxaad sameyn karto waa iibso alaabada aerosol ee aan ku jirin ama lagu sameeyay waxyaabo burburin kara ozone. Ka mid ah gaasaska ugu waxyeellada badan ee molekoolkan waxaa ka mid ah:
CFC-yada (chlorofluorocarbons). Iyagu waa kuwa ugu waxyeellada badan waxaana lagu sii daayaa qaab aerosol ah. Waxay ku leeyihiin nolol aad u dheer jawiga sidaa darteedna, kuwii la sii daayay bartamihii qarnigii XNUMXaad wali waxyeello ayey geysanayaan.
Halogenka hydrocarbon. Alaabtaan waxaa laga helaa dab-bakhtiiyeyaasha. Waxa ugu fiican ayaa ah in la hubiyo in dab bakhtiiye aan iibsano uusan lahayn gaaskan.
Bromide Methyl. Waa sunta cayayaanka ee loo isticmaalo dhirta dhirta. Markii lagu sii daayo deegaanka waxay baabi'isaa ozone. Ujeeddadu maaha in la iibsado qalabka guryaha lagu sameeyo oo lagu sameeyo kayntaas.
Ha iibsan buufin ay ku jiraan CFCs.
Ha isticmaalin dab-bakhtiiyeyaasha halon.
Soo iibso qalab dahaaran oo aan lahayn CFCs sidoo kale sida guf loo yaqaan 'agglomerated'.
Haddii a dayactirka hawada wanaagsan, Waxaan ka hortageynaa qaybaha CFC inay gaaraan lakabka ozone.
Haddii qaboojiyaha uusan u qaboojin sidii la rabay, Waxaa laga yaabaa inuu daadiyo CFC. Waxaa la mid ah qaboojiyaha gaariga.
Baabuurka u isticmaal sida ugu yar ee suurtogalka ah waxaadna isticmaashaa gaadiidka dadweynaha ama baaskiil.
Soo iibso nalalka badbaadiya tamarta.
Had iyo jeer raadso wadada ugu gaaban inaad ku raacdo gaari haddii aysan jirin ikhtiyaar kale oo aan ahayn qaadashada. Sidan oo kale waxaan sidoo kale ka eegi doonnaa jeebka.
Isticmaal qaboojiyaha iyo kululaynta sida ugu yar ee suurtogalka ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto burburka lakabka ozone iyo sida ay muhiimka u tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Burburinta lakabka Ozone